Njengondwendwe eBonn - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguFrank
Igumbi elicocekileyo nelizolileyo kufutshane neRhine, iRohmühle, iPost Tower kunye neTelekom.
Iivenkile zeemfuno zemihla ngemihla zisondele kakhulu (malunga nemizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo). Kubantu abatshayayo kukho ityeya engenayo "ifenitshala". Ukwenza indlu ibe shushu phantsi kwiintsuku ezibandayo. Imizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ukuya eRhine.
Ikhitshi likwindawo yokufunda esetyenziswa ngamaxesha athile (emini kuphela) ngoko lisetyenziswa "kunye" (ukupheka ikofu). Ngoko ngokomthetho, ikhitshi negumbi lokuhlambela zisetyenziswa nguwe kuphela.
Malunga nemizuzu eyi-15 ukusuka eS-Bahn ukuya embindini wesixeko (Bonn). Ukuya etreyini yima malunga nemizuzu eyi-3. Malunga nemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto kunye noDeutsche Bahn ukuya eBuel. Okanye qhubeka uye eCologne malunga nemizuzu eyi-20.